चार वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन पाँच वर्षमा पनि गर्न नसक्ने यो कस्तो नेतृत्व ?
हामी नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यतामा छौं । अबको नयाँ नेतृत्वमा २१ औं शताब्दिको नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्न सक्ने योग्यता, क्षमता, लोकप्रियता भएको व्यक्तित्वको आवश्यकता छ । अहिले हामी त्यही खोजीमा छौं । यो टिममा भएका ७÷८ जना नेताहरु सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिने भनेर अगाडि सर्नुभएको छ । उहाँहरुमध्ये १ जनालाई सभापतिमा उम्मेदवारी बनाउने र संस्थापन पक्षको अहिलेको सभापति भर्सेस १ जना हुँदा पनि ६० प्रतिशत आममहाधिवेशन प्रतिनिधिको मत यो पक्षमा छ । र, सभापतिको निर्वाचनमा उहाँहरुले जित्नु हुनेछ । खासमा अब हामीले वैचारिक बहस गर्न सक्ने नेतृत्व खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कमसेकम १ घण्टा सत्तापक्षको नेताको हैसियतले वा प्रतिपक्षकै नेताको हैसियतले बहस गर्न सक्ने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजीमा छौं हामी । अहिले भएको नेतृत्वमा त्यो क्षमता देखिएन, त्यो खालको परिस्थिति पनि देखिएन । जसको कारण हामी कांग्रेस इतिहासमै सानो भएर खुम्चिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यौं । त्यो इतिहासमै खुम्चिएको सानो कांग्रेसलाई फेरि हिजोको जस्तै इतिहासकै बलियो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्नका लागि हामी लागिपरेका छौं ।
त्यसका लागि यो नेतृत्वमा सक्षमता देखिएको छैन । जसरी प्रस्तुत हुनपर्ने थियो, त्यो अवस्थामा प्रस्तुत भएको देखिएन । हिजोको हाम्रो इतिहासको जस्तै कांग्रेस पार्टीको रुपमा रुपान्तरण गर्न धैरै चुनौती छन् । त्यसकारण हामी आगामी नेतृत्वका लागि सक्षम, योग्य र २१ औं शताब्दि सुहाउँदो र युवालाई पनि समेट्न सक्ने र पार्टीभित्र ४०–६० भागबण्डाको अन्त्य गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजीमा छौं । पार्टीभित्र योग्यता, क्षमता, बलिदानी, पपुलारिटी, त्याग–तपस्यालगायतका विषयलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ ।
बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो– पार्टीमा सुकिला–मुकिला, चिल्ला गाडी चढ्ने र सुटकेस बोक्नेहरु हावी हुनेछन् । त्यो बेलामा इमानदार, कर्तव्यनिस्ठ कार्यकर्ताहरुले आन्दोलित हुनुपर्नेछ । त्यो आन्दोलनबाट आएको लोकतन्त्र सधैंका लागि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो । त्यस्तै, आज नेपाली कांग्रेसभित्र सुकिला–मुकिला पैसावालहरु हावी भएको अवस्था छ । यसलाई अन्त्य गर्ने र निष्ठावान् कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्ने क्षमता भएको नेतृत्वको खोजीमा हामी छौं ।
अहिले पार्टीमा पुराना नेताहरुको वा उमेर बढी भइसकेका नेताहरुको जोश र होस दुवैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । होसपूर्ण रुपमा पार्टीलाई अघि बढाउन व्यवस्थापन पनि मिलाउनुपर्छ । युवाहरुको जोशलाई पनि पार्टीभित्र स्थापित गर्दै लैजानुपर्छ । पार्टीभित्र देखिएको जोश र होसलाई समायोजन गरेर १४ औं महाधिवेशनले पदाधिकारी स्थापित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । ८४ वर्षको उमेरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २० वर्षको जस्तो गरेर संगठनका लागि काम गर्नुभयो । यसले गर्दा जसले जतिबेला पनि २० वर्षको युवाजस्तो जोश देखाउँछ त्यसलाई पार्टीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
उमेरलाई भन्दा पनि उसको जोश र जाँगरलाई हेर्नुपर्छ । जोश र होस दुवै मिलाएर १४ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी छान्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसलाई हिजोकै अवस्थामा ठूलो पार्टीको हैसियतमा पुर्याउन सकिन्छ ।
कांग्रेसमा परिवारवाद ?
जसले पार्टीमा त्याग–तपस्या गर्छ, जसले बलिदानी गर्छ, जसले निरन्तर रुपमा काम गर्दै आउँछ त्यसले स्थान पाउनपर्छ । परिवारका नाममा राजनीति गर्ने, अरु केही पनि नगर्ने, सुतेर बस्ने, जागिर खाने विदेश जाने अनि परिवारका नाममा यहाँ आएर राजनीति गर्न थाल्यो भने परिवारवादको कुरा पनि आउँछ ।
अब सधैं हामीसँगै बसेर राजनीति गरेकाहरुलाई परिवारवाद भन्न मिल्दैन । जो जेलमा बस्यो, आन्दोलनमा लड्यो, विभिन्न चरणमा सहभागिता रह्यो भने त्यहाँ परिवारको कुरा गर्नु हुँदैन । उसले पनि परिवारको नाताको रुपमा धेरै कुरा त्यागेको हुन्छ । म त्यसरी कुनै वादका कुरा गर्दिनँ, उसको त्यही परिवारमा जन्म भयो, त्यहाँ त्यही राजनीतिको बारेमा सुन्यो भने किन राजनीति गर्न नपाउने ? ऊ त्यो परिवारको सदस्य भएको हुनाले जेल बस्यो, लठ्ठी खायो भने उसको पनि त्याग हुन गयो नि ! त्यसलाई चाहिँ परिवारवाद भन्न मिलेन । अरु कोहीभन्दा मेरो भूमिका कम छैन भने मलाई परिवारवाद भन्न मिल्दैन ।
म भन्दा बढी लगानी छ, त्याग–तपस्या छ, पार्टीभित्र संगठन गरेको छ भने अरु कोही आउन सक्छन् । नत्र त मैले नै खोज्ने हो नि ! ऐतिहासिक आन्दोलनहरुमा लागेको, पार्टीभित्र काम गरेको, अन्य लगानी सबै कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्छन् । हामीले कहीँ–कसैलाई परिवारका नाममा भन्ने भन्दा पनि उहाँहरुको हिजो पार्टीभित्र भएको लगानीलाई मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको विधानले स्पष्टसँग ४ वर्षभित्र गर्नपर्छ भनेको छ । १३ औं महाधिवेशन सकिएको दिनमा हाम्रो सभापतिलाई के थाहा छ भने, आजको ४ वर्षपछिको यही मितिमा गर्नुपर्छ भन्नेपनि स्पष्ट छ । त्यो कुनै भूकम्प आएको होइन, बाढीपहिरो आएको होइन, कोभिड आएको पनि होइन । उहाँले ४ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने इच्छाशक्ति राख्नु भएन । ५ वर्ष पुग्यो । त्यो पनि कांग्रेसको विधान अनुसार नै पुग्यो ।
विधान अनुसारको मिति सकिएर नेपालको संविधान २६९ को उपधारा ४ को शरणमा छौं । यो अवधिभित्र नेपाली कांग्रेसको वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसको वैधानिकतामा कतै आँच आउने भयो भने इतिहासमै सबैभन्दा बढी कलंकित नेतृत्व नै हुन्छ भन्ने तथ्य समयले प्रमाणित गर्ने छ ।
त्यसकारण यो कलंक पार्टी सभापतिलाई लाग्ला, उहाँका पदाधिकारीलाई अनि ७७ वटै जिल्लाका पदाधिकारीहरूलाई पनि लाग्न सक्छ । कहीँ न कहीँ छाप त अलिअलि लाग्छ नै । हाम्रो स्पष्ट दायित्व के हो भने, भदौ १९ गतेभित्र कांग्रेसको महाधिवेशन सक्नुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगमा हाम्रो अधिवेशन सकियो भन्नुपर्ने छ । आयोगले के भन्छ भने, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनुपर्ने छ, नेपाली कांग्रेसको १२४ औं महाधिवेशन संविधानले चिन्दैन । संघको पदाधिकारी र प्रदेशको पदाधिकारी हुनुपर्ने भन्नेमात्र चिन्छ । उसले निर्वाचन चिन्छ । त्यसले गर्दा हामीले प्रदेश र संघको पदाधिकारीको निर्वाचन भएको आयोगमा जानकारी गराउनै पर्छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको प्रश्न बन्द हुन्छ । नत्र हामीलाई संकट छ । यसको दायित्व र जिम्मेवारी हामीसँगै छ । कुनै पनि हालतमा कुनै षड्यन्त्र नगरी महाधिवेशन हुनुपर्छ ।
अहिले पनि महाधिवेशन गर्न नदिने केही षड्यन्त्र भइरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने म जस्तै देशभरका सभापतिहरूले ३ वर्ष भएदेखि महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं । तर, ५ वर्ष बित्दा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने कस्तो नेतृत्व चयन गरे छौं भन्ने कुरामा पश्चाताप पो छ त !
(केसी सभापति नेपाली कांग्रेस, नुवाकोटका सभापति हुन् ।)
प्रकाशित मिति : साउन ८, २०७८ शुक्रबार १७:४२:२२, अन्तिम अपडेट : साउन ८, २०७८ शुक्रबार १७:५९:२७